I-Lily pad jasper ihlala ikhwaza ngokungafanelekanga i-lily pad obsidian -Vidiyo
I-Lily pad jasper
tags leyaspisi, I-Lily pad
Thenga i-lily pad yendalo jasper kwivenkile yethu
I-lily pad jasper idla ngokubizwa ngendlela ephosakeleyo nge-lily pad obsidian. Kambe ke kulula ukuba zichonge ngokuvavanya ukwaphuka kwabo, ubulukhuni babo, okanye amandla athile adumileyo ngesixhobo esisiseko se-gemological.
I-Lily pad jasper, umdibaniso wequartzular quartz okanye chalcedony kunye nezinye izigaba zezimbiwa, iyinto e-opaque, iintlobo ezahlukeneyo ezingcolileyo, ezihlala zibomvu, zityheli, zimdaka okanye ziluhlaza ngombala, kwaye kunqabile ukuba ziluhlaza. Umbala oqhelekileyo obomvu ubangelwa kukufakwa kwesinyithi. I-Jasper iqhekeza ngomhlaba ogudileyo kwaye isetyenziselwa ukuhombisa okanye njengelitye eliligugu. Inokugqitywa kakhulu kwaye isetyenziselwa izinto ezinjenge vases, amatywina, kunye neebhokisi ze-snuff. Ubungakanani obuthile bejaspi buqhelekileyo ngo-2.5 ukuya ku-2.9.
I-Jasper lilitye le-opaque phantse kuwo nawuphi na umbala ovela kumgangatho wamaminerali wesiseko sedements okanye umlotha. Iipateni ziyavela ngexesha lenkqubo yokudibanisa nokwenza ukuhamba kweepateni kunye nokugcina iipateni zentsusa yentsusa yesitayile okanye umlotha wentabamlilo. Ukujikeleza kwe-hydrothermal kucingelwa ukuba kuyimfuneko ekwakhiweni kwejaspi.
I-Jasper inokutshintshwa ngokufakwa kwamaminerali ecaleni kokungabikho kokuhamba kubonelela ngokubonakala kokukhula kwezityalo, okt. Dendritic. Izixhobo zentsusa zihlala zidityanisiwe okanye zijijeke, emva kokubekwa, kwiipatheni ezahlukeneyo, eziye kamva zizaliswe zezinye iiminerali ezimibalabala. Ukutshintsha kwemozulu, kunye nexesha, kuya kudala imisonto enemibala eqaqambe kakhulu.
Imifanekiso eqhekezayo ibonisa indibaniselwano zeepateni, ezinje ngebhendi yokuhamba okanye iipateni ezisusa kumanzi okanye umoya, ukuguqulela okanye ukungafani kwemibala, kukhokelela kwinto ebonakala ngathi iyimifanekiso okanye imifanekiso, kwicandelo elisikiweyo. Ubunzima obuvela kwiziko buvelisa ukubonakala okwahlukileyo okubhaliweyo, jasper yolusu olunobukhwele, okanye umgca wokulinganisa ukusuka ekuqhekekeni njengoko kubonwe kwi-leisegang jasper. Iliwa eliphilisiweyo, eliqhekekileyo, livelisa ibascciated eyaphukileyo.
I-Lily pad jasper intsingiselo
Eli litye lokukhulisa kakhulu lizisa uxolo ngamaxesha oxinzelelo, libonelela ngokulingeneyo ngelixa likhuthaza isibindi kunye nokuzimisela, lihambisa kwaye lisiza ukukhulula umlutha kunye nokuzibandakanya.
tags Ntsundu, Tshokolethi, leyaspisi
Ingwe yolusu lwejaspi
tags leyaspisi, Leopard, Ulusu olunolusu
tags leyaspisi, bomvu